सहिद दिवश [कथा] | मझेरी डट कम
keshu birahi — Sat, 05/21/2011 - 09:16
बिहानैदेखि गाउँमा माइकिङ भैरहेको छ । बजारको ठाउँ त्यसै त कोलाहल त्यसमा पनि माइकिङ्गको ठूल् ठूलो हल्ला । हल्लाले गरामुनि बजारलाई नै कोलाहल बनाइरहेको थियो ।
लगातार रुपमा ठूल् ठूलो आवाजमा घर अगाडीको सडकमा माइकिङ्गक भैरहनाले सोहनको निन्द्रा पनि गिजोल्लिरहेको छ । हुन त अगरामुनि त्यति ठूलो शहर त होइन तर विर्तामोड-चन्द्रगढी सडक खण्डमा पर्ने यो शहरोन्मुख वजार सधैं व्यस्त देखिन्छ । झन केही सालदेखि यो बजार विर्तामोडलाई नै जितौँला झैँ गरेर वाक्लिदै गइरहेको छ । उचाल्लिदै गइरहेको छ । गाडीहरू पनि छिचिमिरा झैँ देखिन थालेका छन ।
सोहनलाई अघिल्लो दिनको काम अलि वढी नै परेछ क्यार । काम सिद्ध्याएर अफिसबाट घर आइपुग्दा साढे बाह्र भैसकेको थियो । घरमा आउने बित्तिकै सुतिहाल्ने कुरो पनि भएन । नुवाइधुवाई पनि गर्नै पर्यो । खाना पनि खानै पर्यो । नुवाइधुवाई सकेर खाना खाँदा झण्डै एक बजिसकेको हुँदो हो । त्यसै त सोहन खाने बित्तिकै सुत्न मन नगर्ने मान्छे । जति नै समय भएको भए पनि उसले खाना खाए पछि एक छिन त नसुतिकन यता उता हिडडुल गर्नै पर्छ ।
गााउँघरमा मानवअधिकार हननका घटनाहरू दिन प्रति दिन चुलिइरहेका थिए । त्यस्ता घटनाहरूमा कमि हुनुको अलावा ‘दिन दुईगुना रात चौगुना’का हिसावले बढिरहेका थिए । पक्ष तथा प्रतिपक्षमा रहेका राजनैतिक पार्टीहरूले संझौता पत्रमा जति नै पटक हस्ताक्षर गरे पनि । जतिसुकै पटक सार्वजनिक समारोहमा मानवअधिकारको बारेमा वचनवद्धता दोहोर्याए, तेहेर्याए पनि त्यस्ता घटनाहरूमा भने कमि हुन सकेका थिएन । दिनहुँ जसो उजुरीका घटनाहरू आाइरहन्थे । कहिले कहि त उस्को कार्यालयमा एकै दिनमा चार पाँचवटा पनि उजुरीहरू दर्ता हुने गर्थे ।
झन केही दिनदेखि त मानवअधिकार हननका घटनाहरू घट्ने क्रम चरमोत्कर्षमा पुगेका थिए । साना तिना जुनसुकै कामका लागि पनि बन्द हड्ताल गर्ने र त्यसकै आडमा चोरी, लुटपात, चन्दा-आतङ्क मच्चाउने । अपहरणदेखि लिएर हत्या समेत गर्ने क्रम बढदै गइरहेका थिए । फिल्डमा गयो । अनुसन्धान गर्यो र रिपोट तयार पारेर माथि पठाउँदा कहिले कहि त घर आउदा सोहनलाई मध्यरात नै हुन्थ्यो ।
फिल्डमा जाने, रिपोट तयार पारेर माथि पठाउने र राति अबेर मात्र घर फर्कने त उसको दिनचर्या नै वनिसकेको थियो । ऊ लखतरान वनेर मध्यरातमा मात्र घर फर्कन्थ्यो । यसरी उसले एउटा यन्त्रवत जीवन जिइरहेको थियो । त्यसैले प्रायः सधैं वेलुका ढिलो सुत्ने र बिहान अवेला उठ्ने त सोहनको वानि नै परिसकेको थियो । यो उसको लागि कुनै नयाँ कार्य थिएन । कुनै अनौठो पनि थिएन ।
सोहनलाई ओछ्याननै छाड्न मन लागिरहेको थिएन । ऊ विस्तारामै पल्टिरहेको थियो । सिरानमा भएको रेडियोले विहानको समाचार वजाइरहेको थियो भने भित्ताको घडी पनि टिक टिक गर्दै आफ्नै पारामा दौडिरहेको थियो । भित्ते घडी संग उसले आफ्नो जीवनलाई दाँजिहेर्यो । उसलाई यस्तो लाग्यो कि मानौ यो घडी र उसको दिनचर्यामा एकरुपता छ । अर्थात यी दुवैमा धेरै समानता पाउन सकिन्छ ।
“हैन ए पुनमका बाबा अब त उठ्ने होइन । ” चियाको कप लिएर सोहनको कोठामा राधाको प्रवेस हुन्छ ।
“एक छिन त सुत्न देउन हो । निन्द्रै पुगेको छैन । ” सोहनले अलि लाडे पारामा त्यसो भनेको हुन्छ ।
राधा सोहनकी धर्मपत्नी हो । झण्डै बाह्रवर्ष अघि मात्र उनीहरू वैबाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका थिए । हाल उनीहरूका प्रभात र पुनम नामका दुई कोपिला छन, सानो तथा सुन्दर पारिवारिक फुलबारीमा ।
साच्चै उनीहरूको एउटा सुन्दर तथा आदर्श परिवार छ । दुवै शिक्षित तथा सहयोगी भएकाले गाँउघरमा पनि उनीहरूको स्थान उचो रहेको छ । सबैले उनीहरूलाई मान्ने गर्छन । शिक्षित तथा सहयोगी भएकैले गर्दा गाउँलेहरूले उनीहरूलाई मान्नुपरेको हो । सोहनलाई यस्तै लाग्छ । गाउँघरमा हुने स-सना कममा पनि उनीहरूलाई वोलावट हुने गर्दछ । हुनत त्यस्ता आइपर्ने जुनसुकै कार्यमा पनि सहभागी हुनु उनीहरू आफ्नो धर्म नै ठान्छन ।
पुख्र्यौली घर ताप्लेजुङ्ग भए पनि उनीहरू केही सालदेखि झापाको गरामुनिमा वस्दै आएका हुन । त्यहाँ उनीहरूको एउटा सानो काठको चार कोठे घर छ । घरदेखि नजिकै दश कठ्ठा धानफल्ने फाँटिलो खेती छ । जग्गा जमिनको आयस्ताले खान लाउन राम्रैगरी पुग्दै आएको छ भने जागिरले घर खर्चलाई भ्याएकै छ ।
“अनि आज त पल्लो बजारमा कर्यक्रम छ हेर्न जाने होइन भन्या ?” पतिदेवले ओछ्यान छाड्नै नमानेको देखेर सिरक उठाउन खोज्दै राधा वोलेकी हुन्छे ।
“एक छिन त सुत्न देऊ न हो । राति देखिनै हल्ला खल्ला भइरहनाले सुत्न पाइएकै छैन । अनि आज के कार्यक्रम रहेछ । रातिदेखि नै प्रचार प्रसार भइरहेको छ नि ?” नवुझे झँै गरेर ऊ श्रीमती सामु प्रस्नको झटारो फ्याक्छ ।
“हैन तपाइँ पनि कस्तो मान्छे । ” श्रीमानले फ्याँकेको झटारोलाई उतैतिर फर्काइदिन्छे । उसमा आश्चर्यभाव प्रदा हुन्छ । ऊ असमञ्जश वन्न पुग्छे ।
“अस्ति नै भन्या होइन आज पल्लो बजारमा कार्यक्रम हुँदैछ भनेर । अनि माननीय पनि आउने भनेको भुल्नुभो । देख्नु भएन, त्यसैले त प्रचार प्रसारमा यति जोड दिइरहेका छन । यसो रेडियो सुन्ने, टि.भी. हेर्ने भए पो थाहा हुन्छ त । हजुरलाई फिल्डमा हिड्दै फुर्सद हुदैन । जागिर भन्दा अरु कुराको चासो दिने भए पो ! तपाईलाई जागिर भन्दा अरु कुराको पत्तै हुदैन । एकदिन पनि फुर्सद नहुने तपाईको कस्तो खाले जागिर हो ?”
राधाले श्रीमानको प्रस्नको उत्तरको झटारोको साथमा अलि दुखेको मन पनि मिसाएर यसो भनेकी हुन्छे ।
हुन पनि कामकै व्यस्तताले गर्दा सोहनले घर परिवारलाई भनेजति समय दिन सकेको थिएन । आफू श्रीमान भएको दावा गर्ने कार्य भन्दा केही पनि गर्न सकेको थिएन । त्यो कुरा उसलाई पनि राम्ररी नै थाहा थियो । त्यसैले सम्हालियो र भन्यो ।
“ए हो त नि मैले त भुसुक्कै पो विर्सेको । आजदेखि त शहिद सप्ताह पो शुरु भएको छ त । अनि कार्यक्रम त हुने नै भैगयो नि । अनि आज माननीयबाटै वीच बजारमा निर्माण गरिएका सहिदका शालिकहरूको पनि अनावरण गर्ने भनेको होइन त ?’ श्रीमती नरिसाओस भनेर उसको कुरालाई अलि ध्यान दिए झैँ गरेर भनेको हुन्छ ।
राधाले सरल रुपमा हो भनेर टाउको हल्लाउछे । उसमा रीसको भाव भने देखिदैन । ऊ नाम झैँ सरल छे ।
घडी आफ्नै पारामा दौडिरहेको हुन्छ । भित्ते घडिले घण्टा घरको घडीले झँै कानै खाने गरी ट्याङ्ग, ट्याङ्ग गरेर सात वजेको संकेत गरिदिन्छ । ऊ नउठी ओछ्यानबाटै यसो नजर दौड्याउँछ । घरका सबै कुनामा सूर्यको किरणले आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ । उसलाई यस्तो भान भैरहेको छ कि सूर्यको किरणले छिटो उठ, छिटो उठ ढिलो भयो भनिरहेको छ । अर्थात अबेरसम्म सुतेको देखेर गिज्याइरहेको छ ।
सात बजिसक्दा पनि घरमा कसैको पनि चालचुल थिएन । सोहन संझन्छ - सधैँ यति बेर सम्ममा त केटाकेटी चिया नास्ता गरेर पढ्न वसिसकेका हुन्थे । आमा पनि पूजा पाठमा ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो ‘‘खोइ आज आमालाई सञ्चो भएन कि क्या हो । यति अबेरसम्म उठ्नु भएको छैन त । अनि केटाकटी पनि देख्दिन नि, कता गए ?” कसैलाई पनि नदेखे पछि उसले श्रीमतीलाई त्यसरी सोधेको हुन्छ ।
“आमा यति अवेलासम्म पनि सुतिरहनु हुन्छ र । ” सरलाले हाँस्दै उत्तर फर्काउछे । “आमा अघि नै उठेर मन्दिर जानु भएकोछ । अबत आउने वेला पनि हुन लागिसक्यो । अनि आज सार्वजनिक विदा होइन त ? विद्यालय लाग्दैन भनेर दुवैजना छोराछोरी सुतिरहेका छन । केटाकटीलाई विद्यालय विदा भनेपछि त के चाहियो र । आधा दिनसम्म पनि सुत्न मन पराउँछन । सबै इतिवृतान्त बताए पनि ऊ पुनः वोल्छे ‘ल, तपाइँ पनि उठ्नुहोस । म खाना तयार पार्छु । आज सबैजना कार्यक्रम हेर्न जानुपर्छ । ” त्यति भनेर राधा भन्सा कोठातिर लाग्छे ।
सोहनलाई थाहा छ राधालाई यस्ता खाले कार्यक्रमको नशा नै छ भन्ने कुरा । कार्यक्रम भने पछि माइलकै वाटो धाएर भए पनि जान पछि पर्दिनथी । उसको यो वानी केटा केटी देखिकै हो । पहाडमा हुँदा त ऊ एक दिनकै वाटो धाएरै भए पनि कार्यक्रम हेर्न जानलाई पछि नपर्ने मान्छे । झन यो त गाउँकै डिलमा हुने कार्यक्रम ।
राधाका पाइलाहरू भन्सा कोठातिर मात्र के बढेका हुन्छन एक्कासी विचमै रोकिन पुग्छन । भान्सातिर नगई ऊ फेरि सोहन भएतिरै फर्किएर आउछे र खाटमा वस्छे । श्रीमती फर्किएर आएको देख्दा सोहन सशंकित हुन्छ । मनमा एकखाले भय पैदा हुन्छ । गुनासो पो गर्ने हो कि । घरमा समय दिनु भएन । खालि अफिसको काममा मात्र ध्यान दिनु हुन्छ । यसो केही समय त हामीलाई पनि दिनु पर्यो नि भनेर नमिठो पो मान्ने हो कि भनेर उसलाई मनमा डर पनि त्यतिकै लागेको हुन्छ । हुन पनि लामो समय नै भएको थियो श्रीमान श्रीमती वसेर कुराकानी नगरेको । माया प्रेमका कुरा नगरेको । आफूले आफ्नो पौरुसत्व कायम गर्ने काम भन्दा अरु केही पनि गर्न नसकेकोमा उसलाई आत्मग्लानी भएर आउँछ । ती सबै कुरा संझिएर मनमा अपराध वोध भएर आउँछ । समय समयमा उनीहरू वीच नयाँ नयाँ विषयमा छलफल हुन्थे । व्यापक वहस पछि एउटा निचोड निस्कन्थ्यो । कहिलेकही त छलफल घण्टौ घण्टासम्म पनि जारिरहन्थ्यो । प्रायः छलफलमा छोरा छोरीले पनि सहभागिता जनाउँथे । छोराले आमाको पक्ष लिन्थ्यो भने छोरीले बाबाको । छलफल जुनसुकै विषय वस्तुमा आधारित भएपनि । बहसमा जति सुकै टिक्का टिप्पणी भए पनि निचोडमा भने दुवैजनाको सहमति भएरै छाड्थ्यो । दुवैको एउटै निर्णय वनेरै छाड्थ्यो ।
“ए लाटी तिमीले कायक्रममा जाने त भन्यौ तर यस्ताखाले कार्यक्रमको कुनै अर्थ देखेकी छ्यौ र तिमीले ?” सोहनले वहसको सुरुवात गर्यो तर ठट्यौली पारामा । बहसको सुरुवात प्रायः उसैले गर्नेगर्थ्याे । त्यसैले आज पनि उसैले गर्यो ।
“किन र ?” भन्दै राधाले पनि सरल रुपमा उत्तर दिई ।
‘‘उनीहरूले हिजो देश र जनताका लागि आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह गरेनन् । दिन-रात घाम-पानी र भोक-तिर्खा नभनी लड्दा लड्दै आफ्नो ज्यानकै उत्सर्ग गरे । सहिद भए । त्यही अदम्य शाहस र उत्सर्गको मूल्याङ्कन आज कार्यक्रम मार्फत भैरहेको छ, होइन र ?”
“कसरी ?” सोहनले पनि राधाले झैँ छोटो प्रश्न तेस्र्यायो ।
“कुरा प्रष्टै छ नि, हिजो देश र जनताका लागि लड्दा लड्दै वलिदान प्राप्त गरेका हुनाले आज उनीहरूको बीच वजारमा शालिक वन्दै छ । त्यही शालिकको आज अनावरण पनि हुंदैछ, हैन र ?” उसले पनि श्रीमानको प्रश्न माथि प्रश्न तेस्र्याइदिई ।
“शालिक वनेर के हुन्छ र ?”
सोहनलाई पनि स-साना केटाकेटी संग झैँ सवाल जवाफ गर्न मन लागिरहेको छ । ऊ एउटा पूर्व शिक्षक, त्यही पेसा गरेरै उसले आफ्नो जीवनको उत्तरार्ध विताएको थियो । सायद आजसम्म पनि उसमा त्यही प्रभाव रहेरै होला । उसले आफ्नो पुरानो मास्टरी पेसाको प्रभाव छोड्न सकेकै थिएन । एउटा उत्तर नआउँदै केटाकेटीलाई झँै अर्को प्रश्न तेसाई हाल्ने वानी छ उसको ।
“बीच वजारमा शालिक वनेपछि उनीहरूलाई सबैले चिन्ने छन । उनीहरूको योगदान सबैले सम्झिरहने छन । सरकारले पनि उनीहरूलाई सहिद घोषण गरिसकेको छ । पत्र पत्रिकामा उनीहरूका तश्वीरहरू बारम्वार रुपमा छापिदै आएका छन र छापिइरहने छन पनि । यसले उनीहरूको चर्चा परिचर्चा देश विदेश सबैतिर हुनेछ । ” राधाले आफूले जानेको सबै कुरा पोखिदिई, सरल रुपमा । ऊ हरतरह रुपमा श्रीमानका सवालका जवाफहरू दिन प्रयासरत थिई ।
जतिजति सोहन जिज्ञासा उठाउँदै जान्थ्यो त्यति नै राधा पनि उत्तर दिँदै जान्थी । एक जनाले प्रश्न गर्ने र अर्को जनाले उत्तर दिने क्रम लामो समयसम्म चलिरह्यो । यो क्रम चलिरहदा यस्ते आभाष हुन्थ्यो कि उनीहरू श्रीमान श्रीमती नभएर गुरु चेला हुन । एक असल गुरु र एक आज्ञाकारी चेला । अथवा यो एउटा अन्तरवार्ता थियो, थेसिको विध्यार्थीको अन्तरवार्ता जस्तै । जुन अन्तरवार्ताले उसको प्राप्ताङ्कलाई अर्थात उसले पाउने उपाधीलाई प्रभाव पार्ने छ । मानौ त्यसैले त ऊ सकेसम्म सही उत्तर दिने प्रयाश गरिरहेको छ । राधा भन्दै जान्छे - हेर्नुहोस अरुभन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको त इतिहास हो । उनीहरूको नाम इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरले पोतिने छ । उनीहरू सधैं अम्मर रहने छन । अनन्त अनन्त कालसम्म । ”
“ल ठीक छ । शालिक वन्यो । अनावरण पनि भयो । पत्रपत्रिकामा तश्वीर पनि छापिए । देश विदेशमा पनि चर्चा परिचर्चा भयो । इतिहासको पानामा नाम पनि लेखियो तर यी सव हुँदामात्र के हुन्छ र ?
सोहनको यस्तो कुरा सुनेर राधा अकमक्क पर्छे । केही वुझे केही नवुझे जस्तो । कतै भाषमा फसेजस्तो हुन्छ उसलाई । कता कता उसलाई श्रीमानको कुरा तालन वेतालको जस्तो पनि लाग्न थाल्छ । त्यसैले कुरा विचैमा रोक्दै भन्छे - हैन हजुरले यहाँ कुन कुरालाई उठाउन खोज्नु भएको हो मैले त वुझ्न सकिन नि । अलि प्रष्ट पारिदिनुहोस न । ”
“हेर शालिक वन्नु । त्यसको उद्घाटन हुनु । तस्वीर पत्र-पत्रिकामा छापिनु र चर्चा परिचर्चा हुनुमात्र ठूलो कुरा होइन ।
”सोहनले सोच्यो अझ धेरै बेरसम्म श्रीमतीलाई गुम्राहमा राख्नु राम्रो होइन । हुन त ऊ जति सक्दो चाँडो आफ्नो आशय बताउन चाहन्थ्यो । जिज्ञासा चाँडै मेटाईदिन पनि नचाहेको होइन तर उसले त मात्र श्रीमतीलाई बहसमा सहभागी गराउनु थियो । बहसको माध्यमबाट केही कुरा बताउनु थियो । ‘
तिमीलाई थाहै होला समय गतिशील छ । ’ ऊ बहसको विचोडमा पुग्न खोज्दै थियो । ‘हिजोको कुरा आज र आजको कुरा भोलि नहुन पनि सक्छ । समयको गतिशीलता र युगको मागलाई रोक्ने कसैसंग पनि सामर्थ्य हुँदैन । आजसम्म कसैले रोक्न सकेका पनि छैनन । र भोलि पनि रोक्नलान भन्ने आधार पनि देखिदैन । यो विज्ञानको विश्वव्यापी नियम पनि हो, होइन र ?”सोहनको पछिल्लो कुरामा भने राधाले सहमतिको टाउँको हल्लाउँछे । उसलाई श्रीमानको कुरा मुनासीव जस्तो लागेर आउँछ । मौन रुपमा स्वीकृति जनाउछे । सायद सोहनको त्यो पछिल्लो भनाइमा केही दम भए जस्तो लाग्यो होला उस्लाई । अथवा श्रीमानको कुरालाई गलत ठानेकोमा आत्माग्लानी पनि भएको हुन सक्छ । त्यसैले ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ भने झैँ उसले चुपचाप स्वीकृति जनाएकी पनि हुन सक्छे ।
‘तिमी केही वर्ष अघि र अहिलेको अबस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर हेर न प्रष्ट भैजान्छ्यौ नि । तिमीलाई थाहै छ हिजो के थियो । आज के छ र के भैरहेको छ भन्ने कुरा । हिजो राज्यको करोडौ रुपैया खर्चेर बनाइएका ती शालिकहरू खै आज कहाँ गए ? खै कसले सुरक्षा प्रदान गर्यो । कसैले संरक्षण र सम्बर्धनमा चासो देखाए र ? सबै हेर्दा हेर्दै ढले । अझ भन्नु पर्दा ढालिए । हामी रमिते मात्र भयौँ । आँखा अघि आफ्नै इतिहास ढलेको हेरेर हामी रमायौँ र रमाइैरहेका छौ । आखिर ती मूर्तिहरूको के दोश थियो र ? के साच्चै ती मूर्तिहरू दोषी थिए त ? अनि ती ढान्लेहरूले के नै जिते र ? यो सवाल मेरो मनमा आइरहन्छ । यस्को उत्तर दिने कस्ले ? अरुको त के कुरा साहित्यक स्रष्टाहरूको अस्तित्वसम्म सिध्याउने चेष्टा भएका थिए । ”
सोहनको कुरा राधालाई झन भन्दा झन मुनासिव लाग्न थालेको थियो । श्रीमानले त्यसो भनिरहदा राधा मौन वन्न विवश थिई । आफ्नो उत्तर मिलेर हो या श्रीमानलाई सम्झाउँने कुनै उपाय बाँकी नभएर हो । ऊ चुपचाप कुरा मात्र सुनिरहेकी थिई । ऊ आवाजसुन्य वनेकी थिई । मूर्तितुल्य वनेको थियो उसको शरीर । भाबनासुन्य वनेको छ उसको मनमस्तिष्क । उसको अबस्था देख्दा यस्तोे आभास हुन्थ्यो- मानौ ऊ एउटा मूर्ति हो । जसको आवाज खोसिएको छ । अथवा ऊ एउटा शर्प हो जसको मणीहरण भएको छ ।
सोहनले आज भन्दा अगाडी कहिलै पनि श्रीमतीले त्यसरी गम्भीर भएको पाएको थिएन । हुन त ऊ कुनै पनि विषय वस्तु माथि वढी चासो त लिन्थी नै तर आज भने अलि वढी नै भएको पायो । गम्भीर र धैर्यताका साथसाथै उसमा सहनसिलताको गुणमा पनि कमि थिएन । त्यति लामो दाम्पत्य जीवनको अनुभवमा आज पहिलो पटक यसरी वढी गम्भीर र धर्य भएको जस्तो लाग्यो उसलाई ।
राधाको कौतुहलता वढ्दै गइरहेको थियो । ऊ यति कौतुहल भएकी थिई कि जुन कुराको उसले तुलना नै गर्न सकिरहेको थिएन । सोहनलाई त्यो कुरा चाँहि राम्ररी थाहा थियो, आगो सल्काउन जान्नेले निभाउन पनि जान्नु पर्दछ भन्ने कुरा । हुन त यहाँ आगो सल्काएर निभाउँन नै नजान्नेहरू पनि कम छैनन । यहाँ आगो निभाउँने भन्दा पनि अझ आगो वढाउँनलाई खप्पिस छन । अथवा वलेको आगोमा तेल हाल्नलाई सिपालु छन । वलेको आगोमा तेल हाल्न त सजिलै हुन्छ तर त्यही आगोलाई निभाउँन भने त्यति सहज छैन । अझ कौतुहलता वा जिज्ञासाको आगो सामान्य आगो भन्दा कम हुदैन । त्यसैले कौतुहलताको आगोबाट निस्किएको जिज्ञासाको ज्वालालाई जति सक्दो चाँडो निभाउँनु नै सही ठान्यो सोहनले । ऊ विषयवस्तुको वीटमा आउन चाहँदै थियो । हुन त उसले पहिला नै श्रीमतीलाई आफ्नो आशय बताउन नचाहेको पनि होइन तर विना झलफल, विना बहसको निचोडको के महत्व होला र भन्ठानेर उसले गुदी कुरा लुकाइराखेको थिो ।
“तिमीले अघिल्ला जनआन्दोलनका बारेमा त केही पढेकी छ्यौ हौली नि, होइन र ?” अर्को प्रश्नको झटारो फ्याक्यो सोहनले ।
राधाले पनि झटारो समातेर श्रीमानतिरै फर्काइदिई - पढेकी छु । ” भनेर ।
“त्यसो भए ती आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गर्ने सहिद परिवारका बारेमा पनि केही थाहा होला नि । सुनेकी हौली । पढेकी हौली ?”
“अँ, त्यति धैरै त होइन अलि अलि भने सुनेकीछु । ” उसले पनि सटिक उत्तर दिई ।
“अलि अलि के सुनेकी छौ भन त । ” सोहनले पुनः प्रश्न तेस्र्याइहाल्यो ।
राधाले हालसालै मात्र सहिदका सन्तानले व्यहोर्नु परेको हविगतको बारेमा एउटा रिपोट पढेकी थिई । सहिदका परिवारले दुःख पाएको । उनीहरूले खान लाउन नपाएको । हिजो मात्र एउटा दैनिक अखवारले शालिककै मुनि वसेर सहिदका सन्तानहरूले भीख मागिरहेको रिपोट प्रकाशन गरेको थियो । त्यही कुरा बताई उसले । ”
“हो यहीनेर छ गुदी कुरा । तिम्रा सारा प्रश्नहरूको उत्तर पनि यहींनेर लुकेको छ भन्ने लाग्छ मलाई त । ”
“मैले त बुझिन नि । अलि बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस न । ” राधाको कौतुहलता झन झन बढ्दै थियो ।
“तिमी न आत्तेऊ न । तिमीलाई म राम्ररी बुझाउँछु । ”
उसले अझ प्रष्ट पार्दै भन्यो - हेर सहिद घोषणा गरेर, शालिक बनाएर । पत्र पत्रिकामा तश्वीर छापिएर मात्र हुदैन । पहिलो कुरा त सहिदले देखाएको बाटोमा हिड्नु पर्यो । दोश्रो महत्वपूर्ण कार्य भनेको सहिदका सन्तान र तिनका आश्रित परिवार के कति छन, के कस्तो अबस्थामा छन भन्ने कुराको पहिचान गरी उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्यो । उनीहरूको शिक्षा तथा रोजगारिको ग्यारेन्टी गरिनु पर्यो । राज्यबाट उपलब्ध हुने सबै खाले सेवा सुविधाहरू उनीहरूलाई छिटो र छरितो ढङ्गबाट प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान मिलाउनु पर्यो । सहिद घोषणा गरेर, शालिक बनाई अनावरण गरेर तथा पत्र -पत्रिकामा समवेदना छपाएर मात्र हुदैन । त्यति गरे पछि मात्र सहिद प्रति सम्मान हुनेछ । उनीहरूको आत्माले शान्ति पाउँने छन । नत्र यी सबै देखावटी कुरा मात्र सावित हुनेछन । ” सोहनले कुरा छर्लङ्ग हुने गरी भनिदियो ।
श्रीमतीका मनमा लागेका अन्य जिज्ञासाहरू पनि साम्य पारिदियो । श्रीमानको यो कुरामा अहिले भने राधा सहमत हुन पुगी । जिज्ञासाको उत्तर पाएर होला अनुहार प्रसन्न देखियो । उसलाई ऐना झै छर्लङ्ग भयो ।
“अहिले भने म हजुरको विचारसंग पूर्णरुपमा सहमत हुन पुगें । यस्ता खालेकार्यक्रम त वर्षेनी हुने गरेकै हुन नि । खालि सहिदको नाम मात्र लिने तर उनीहरूले देखाएको वाटो भने नहिड्ने परिपाटि आज मौलाएको रहेछ । वर्षेनी सहिद सप्ताह मनाइन्छ । उनीहरूको तश्वीरमा एक चिम्टी अबीर र एउटा फूलमाला चढाउने काम हुन्छ । तस्वीरमा एक चिम्टी अबिर र एउटा फूलमाला चढाउने काम भन्दा अरु वढी केही पनि हुन सकेको छैन । सहिदका नाममा अरवौ खर्च भैरहेको । राज्यको ढिकुटी मासिएको छ तर उनीहरूको लागि भने केही हुन सकिरहेको रहेनछ । उनीहरूको चहर्याइरहेको घाउमा मलम लगाउने काम को अलाव यहा त घाउलाई झनै चर्काउने काम मात्र पो र्भका रहेछन । ओहो ! म त पुरै अन्धकारमा पो रहेछु । अहिलेमात्र छर्लङ्ग भयो । ”
राधामा यस्ता गलत प्रवृतिको विरोध गर्ने रहर बढेर आयो । दृढता सलमलायो । मनमा विद्रोहका ज्वारा भाटाहरू फुट्न थाले । त्यही विद्रोह वोल्न थाल्यो - अब भने यस्ता गलत कामले निरन्तरता पाउनु हुदैन । यस बारेमा सबैलाई सचेत गराउँनु पर्दछ । ”
सोहनले श्रीमतीसंग गफ गर्दा गर्दै चिया पिउँन पनि भुलिसकेको थियो । चिया सेलाएर हिउँ जस्तै भैसकेको थियो । उसले चिसो चिया एकै घुट्कीमा पिइदियो र कप श्रीमतीलाई दियो । राधा पनि रित्तोकप बोकेर भान्सा कोठातिर लागी ।
रोयो यो मन
त्यो गिद्द सिनो खाएर
मसँगै उड्ने चरी आज किन टाढा भयेा ।
चुहिने घर खरको छानो
दासताको विउ टिकदैन धेरै दिन.....
बगैचामा माली छैन